Iindaba ezi-3 kunye neziganeko ezingama-21 ezibalulekileyo kumxholo we-GEO-Ukuqala kwe-2019-iGeofumadas
NgoFebruwari, 2019 Geospatial - GIS, Zobunjineli, ezintsha
I-Bentley, iLeica kunye nePlexEarth zezinye zeendaba ezinomdla kakhulu eziqala ngoFebruwari 2019. Ukongeza, sibonisa ukuba siqokelele iminyhadala engama-21 enomdla ezayo, apho uluntu lonke lweengcali ze-geoengineering lunokuthatha inxaxheba. Ezinye zezihloko ekujongwe kuzo kwezi ziganeko zezi: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, uyilo, CAD kunye neIoT.
Buza i-Expert-i-MicroStation ConNECT Edition
Oku kuye kwaqaliswa nguBentley, njengenye indlela ebalulekileyo kubasebenzisi abahlala befuna iingcebiso ngaphaya koxhaswa lobugcisa olunikezwa ngamanqaku okanye kwi-webinars yezicelo. Le memory kufuneka Mna ndimvelisile kwelinye iziganeko eLondon, emva xa inkqubo cadastral of a zwe laseMelika wayefuna ukuba abasuka Geographics ukuba BentleyMap neqela lezicelo ziphuhliswe, iifayile ezininzi 4500 e DGN kunye ngeWeb zembali ukuba kudlule Oracle Spatial .
Ngamafutshane, ziiseshoni zasimahla ezibizwa ngokuba "Buza iNgcali", ngolwesiBini ngo-12 emini, ixesha laseMpuma lase-US kunye ne-1 PM ixesha laseLondon.
Apha ungakwazi ukujoyina, ukuba uqaphele imiba ezayo.
Ngokomzekelo, ezi zihloko eziza kuthathwa kwiiveki ezilandelayo:
I-parameter ye-12-Feb yamalungiselelo oSebenzi kunye neeSebenzi kwiimfuno ze-CONNECT Edition
Izicelo ze-19-Feb zokufuduka zenziwe nge-VBA, BMR kunye ne-MDL
I-26-Feb Iinkonzo zam Cloud ze-App CONNECT Edition
I-Leica Geosystems enkulu, ibonakaliswe iminyaka emininzi njengenye yeentsika ekudalweni, kulawulo nasekubekweni esweni kwetekhnoloji esetyenziswayo ukuza kuthi ga ngoku, ukusuka kumhlaba we-geospatial, ukhuseleko, ukhuselo, ubunjineli ukuya kulwakhiwo. Nge-7 kaFebruwari, kwabhengezwa ukuba ubudlelwane bayo kunye ne-SVAB, inkampani ezinikele kuphuhliso lweemveliso zezinto zokumba--ukusuka ekulawuleni, ukuya kwiinzwa kunye nokulawula-; Kuhlawulwe, bobabini baveza esinye sezisombululo zolawulo loomatshini, kugxilwe kwimveliso ye-iXE3 kunye ne-iGW3. Esi sisombululo asiyonto ngaphandle kwenkqubo esekwe ekuqwalaselweni kwezixhobo ze-Quantum SVAB.
Ukuba khumbula, i icon Leica iXE3 yinkqubo evumela ulawulo oomatshini kwi 2D kunye 3D kunye ngqo phezulu, ngokusebenzisa panel yolawulo uyakwazi ukwenza imifuziselo kwendawo, enika ububhetyebhetye entsimini; Kusenjalo i iGW3, i-real-time ua ibe likhaba - i-emele excavator, ukuba benze utshintsho ngoko nangoko kwaye uphephe ukuchitha ixesha kungqinisiswa sokulinganisa ngqo ezi.
Inkqubo eyenziwe nguLeica + SVAB, yiSixhobo sokuKwazisa, asiyi-wireless ngokupheleleyo - ixhunyiwe ngeBluetooth Low Energy (BLE), kwaye inokukwazi ukufumana oko isisitishi somatshini apho inkqubo ukucima, kunye nokuchonga ukuba yeyiphi iisistim okanye izixhobo ezidibeneyo kumatshini.
Le nkqubo yokuzibandakanya ihlanganiswe nobuchwepheshe obuphambili, iXXXXUM kunye ne-iGW3, eguqulela ekusebenzeni okukhulu nokusebenzayo komshishini
Abanye abaqhubi batshintsha iibhakethi amatyeli aliqela ngemini; Ngoseto lokuqonda isixhobo, umngcipheko wempazamo yomntu uyasuswa. Ukudityaniswa kwesisombululo solawulo lomatshini kuthetha ukuba umqhubi ufuna kuphela ukugxila kwiphaneli enye
Enye yeenzuzo zale nkqubo kukulungiselela iinkqubo zabaqhubi boomatshini, ukuphelisa isidingo sokutshintsha useto ngesandla. Ukongeza, ithintela nawuphi na umsebenzisi (i-novice okanye ingcali) ekusebenziseni ngokungafanelekanga i-emele-umhlakulo, ukudala inkunkuma yexesha kunye nokuphindaphinda kukombiwa okoko le nkqubo inxibelelana- ithumela izilumkiso ukuba umqhubi ukhetha isixhobo ngaphandle kwemodyuli yokwazisa isixhobo -Izenzekelayo ngokupheleleyo. Olunye uncedo kukuba iyazibona izixhobo ezinje ngeetyhubhu zokuthambeka ezisemgangathweni kunye nokujikeleza okujikelezayo okususwayo.
Inkqubo yokuqatshelwa kwesoxhobo isekela umgangatho omtsha osebenzisa ingcaciso apho isetyenziswa somsebenzi womatshini ixhunyiwe.
Silindele ukuba, kweli cala, umgangatho wale mveliso, njengoko bephumelele kuyo yonke indlela kaLeica, ngaphandle kokungayikhathaleli i-Co-creator SVAB, ebezinkokeli ekunikezeni iimveliso kule ndawo. hydraulic izixhobo. Kungekudala emva koko siza kubona ukusetyenziswa kwale nkqubo kunye nezibonelelo ezizisayo.
Uninzi lwazi i-Plexscape yokuba ngabaphuhlisi bento ebizwa ngokuba yiPlexEarth, esinye sezixhobo ezisisiseko seengcali ezisebenzisa iinkqubo zeCAD kuyilo olusebenzayo lweeprojekthi ze-AEC (Architecture, Engineering kunye nezoKwakha). I-Plexscape kutsha nje yenza umanyano neTranSoft, kunye nentsebenziswano entsha neBird.i iyaqhubeka nokusothusa; iqonga lokufikelela kunye nokujonga imifanekiso evela kwiisathelayithi okanye emoyeni, efumana idatha kwezinye zeegrey kwicandelo lemifanekiso enje nge: AIRBUS, Digital Globe, Bluesky, okanye iplanethi. I-Bird.i idibanisa ukufikelela kwimifanekiso kunye neenkqubo zobukrelekrele bokuzenzela, ukufumana idatha ekumgangatho ophakamileyo ye-geospatial yentengiso ye-AEC kunye neenkqubo.
Kufuneka imfuneko yokuhlanganiswa kwezi zikhankanywe ngasentla, njengempendulo kuzo zonke ezo ngxaki ezenzekayo, xa senza nayiphi na imisebenzi equka imifanekiso kunye neenkqubo ze-geoengineering; Njengomzekelo: ukuthengwa kweemifanekiso eziphezulu (iindleko eziphezulu), iimpazamo ekuyilo, ukulibaziseka okanye ukuqhutyelwa ngeemifanekiso ezikhululekile kunye nokulinganiselwa kokusetyenziswa, ukuchaneka okuphantsi okanye ukuthembeka.
Kwi-Plexscape, sizibophezele ekutshintsheni indlela abanonjiniyela basebenza ngayo kwizakhiwo zobugcisa, ubunjineli, kunye nezokwakha (AEC) ngokubhinqa isikhala phakathi koyilo kunye nehlabathi langempela. " utshilo. ULambros Kaliakatsos, uMseki kunye ne-CEO yePlexscape.
I-PlexEarth kunye neBird.i zenze iindlela ukuze iinkampani ezincinci, eziphakathi okanye ezinkulu, ezilawulwa kwicandelo lokwakha, ioyile, igesi, ezemigodi, okanye amandla ahlaziyekayo, zinokusebenzisa imifanekiso yesathelayithi ngaphakathi kumaqonga e-CAD anjenge-AutoCAD . Ukufikelela kwangexesha kwidatha ye-geospatial kuvumela umsebenzisi we-CAD ukuba avelise idatha ehlaziyiweyo, esekwe ngcono kunye nokubeka esweni ulwakhiwo, ngokukhawuleza nangokulula.
Sikholelwa ngokuqinile ukuba ubudlelwane bethu neBird.i kuya kuvumela ootitshala be-AEC ukuba baqulunqe ngokuzithemba okukhulu kwaye bathathe iinkqubo zabo kwinqanaba elilandelayo ngokufikelela kwangoko kwimixholo ye-premium.
Inkqubo iya kwenziwa njani?
Kaloku, Bird.i yokuqala esebenza ekuvuleleni ukuya ekupheleni ophezulu-imaging, kwelinye icala, yaziwa ku PlexEarth, aziwa Plexscape, izibonelelo sele esekelwe ilifu yathandwa ngokuba yinxalenye izixhobo Autodesk, oko kuya kunceda kunye nokuhlela, usasazo kunye nokukhethwa imifanekiso ezithile ukuba ufuna umsebenzi, ukuze kamva ingasetyenziswa kwiinkqubo zoyilo kunye nolawulo data, ngokusekelwe AEC.
Nantsi uluhlu lweziganeko ezikhankanyiweyo ngasentla, khetha nje omnye umdla wakho kwaye kuya kukuthatha kwiphepha lokubhalisa.
Ngomhla we-24 ku-Epreli-Qonda izibonelelo zokufakwa kwemephu yelifu. Ukuqonda iiNzuzo zeMephu kwiLu
I-20 Februwari- Ukudala kwipaneli yokusebenza yezithuthi kunye ne-ArcGIS. Ukudala iDashboard Operation Dashboard neArcGIS
Ngomhla we-12 kuFebruwari-I-GIS yokusebenzela: ii-OpenUtility -Februwari. I-SIG Workshop: OpenUtilities
I-12 kaFebruwari-I-PostGIS ithandwa ngumsebenzi osebenzayo ukuphucula isisombululo seengxaki zendawo. I-PostGIS eFundekayo isebenza kakhulu ekuphuculeni ingxaki ye-Spatial-Solving
I-12 kaFebruwari-I-GIS Workshop: Ukumodareka ngokoqobo kwi-EMEA. I-Workshop ye-SIG: Imodareyitha ye-EMEA
13 Februwari- Indibano yokusebenzela ye-GIS: Iindlela ezivulekileyo- kuFebruwari.
13 Februwari- I-SIG Workshop: Software software
27 Februwari- Uhlaziyo olutsha lwe-teknoloji yekhnoloji yekhono lobugcisa kunye nolwazi olubalulekileyo lwe-GEOINT. Uhlaziyo olutsha kwiModeli yoBuchule beTekhnoloji yeGeospatial kunye neGEOINT ebalulekileyo yoLwazi
27 kaFebruwari- Ukulungiswa kweMigangatho yeGrid Grid Modern
Nge-28 kaFebruwari- Indlela esebenzayo yokuhamba kunye nocwangciso oluphezulu lwe-TBEST. UCwangciso lweThutho oluPhumeleleyo kunye noCwangciso lweNqanaba lokuPhumela nge-TBEST
7 Matshi- Jonga idatha yakho kwindlela entsha usebenzisa iGis 3d. Bona idatha yakho kwiMilinganiselo emitsha Ngokusebenzisa i-3d Gis
I-13 Matshi-Ukusetyenziswa kweMiboniselo yomhlaba ukubeka iliso uhlahlo lwabiwo lwamanzi lokuphathwa kwamanzi. Ukusebenzisa imiSebenzi yomhlaba ekujongeni uhlahlo lwabiwo lwamanzi lolawulo lwamanzi olwandle
16 ka-Epreli- Ukwaziswa kwedatha kunye nohlalutyo lwexesha lokusebenzisa uvavanyo lweSavefer Data kunye nokuhlalutya kweeNkcazo zexesha usebenzisa iSferfer
12 Februwari I-OpenRoads Designer: ukulungelelanisa ukutshintsha
Ukususela kwi-12 kaFebhuwari ukuya kwi-9 ka-Apreli- Ingeniso kwi-BIM 360 design. Intshayelelo yoyilo lweBIM 360
14 Februwari- Iindaba kwi-3D kunye ne-Infraworks. Yintoni entsha kwi-Civil 3D kunye ne-Infraworks
19 ngoFebruwari I-Tech Talk: Isingeniso kwenkampani yesakhiwo
21 Februwari- Iingcebiso kunye namaqhinga okusebenza kunye nedatha yoluntu. Iingcebiso kunye neenjongo zokuSebenzisana neNkcukacha zoLuntu
27 Februwari - Ukwakhiwa kwejubane eliphezulu kwiibhanti eziphakamileyo: i-OpenBridge Designer, isisombululo seBentley BIM. I-Speed ​​Speed ​​Design yeBridges Speed ​​Speed: Umyili we-OpenBridge, kwi-Bentley BIM Solution
I-5 Matshi- Ukufakwa kweenkcukacha zengingqi kwiimfuno zewebhu eziphucula amava omsebenzisi. Ukufakela iNkcazo yeNgingqi kwiiWeb Apps ezithuthukisa amava oMsebenzisi
Ngomhla we-13 ku-Matshi webinar: Sebenzisa Umthombo ovulekileyo we-GIS ukudibanisa i-Geospatial kunye ne-CAD yokuhamba komsebenzi-Matshi 13, 2019. I-Webinar: Ukusebenzisa umthombo ovulekileyo we-GIS ukudibanisa iGeospatial kunye ne-CAD Workflows - 13th Matshi 2019
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-geoteki + iDronetech: akufanele ulilahleke
Post Next Ndenze njani unyana wam waseVenezuelaOkulandelayo »